उपत्यकामा ६० सहित १२५ सङ्क्रमित थपिए | NepaleKhabar.com
उपत्यकामा ६० सहित १२५ सङ्क्रमित थपिए
काठमाडौं, फाल्गुन ५ गते । नेपालमा कोरोनाभाइरसका १२५ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा तीन हजार ८३८ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा १२५ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा पछिल्लो चौबीस घण्टामा ६० जना सङ्क्रमित थपिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भक्तपुरमा छ, ललितपुरमा नौ र काठमाडौंमा ४५ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले हाल कोरोना सङ्क्रमित ६१ जना आईसीयूमा र १३ जना भेन्टिलेटरमा उपचारार्थ रहेको जानकारी दिनुभयो ।